दाना नपाउँदा कुखुरालाई घाँस ! : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ दाना नपाउँदा कुखुरालाई घाँस !
भजनी । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–३ का कुखुरा व्यवसायी ठाकुरप्रसाद चौधरीले कुखुराको दानाका लागि घाँस तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले मुलुकभर लागू गरेको लकडाउनका कारण दाना उपलब्ध नहुँदा करिब एक हप्तादेखि चौधरीले फार्ममा रहेका करिब ५०० कुखुरालाई घाँसको दाना बनाएर खुवाउँदै आउनुभएको छ । चौधरी मात्र होइन, यहाँका अन्य कुखुरा व्यवसायीले पनि उहाँकै सिको गर्न थालेका छन् । चैतेदशैँ र नयाँ वर्ष लक्षित गरी कुखुरा फार्म शुरु गरेका कुखुरापालक किसानले बजारमा दाना नहुँदा घाँस खुवाएर कुखुरा पालिरहेका छन् । ठाकुरले पनि माघ महिनामा ८०० कुखुराका चल्ला फार्ममा हालेको बताउँदै फार्ममा भएका कुखुरा ६० दिनभन्दा बढीको भइसकेको बताउनुभयो ।
४५ दिनभित्र कुखुरा उठाइसक्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका कारण हालसम्म ५० कुखुरा बिक्री नभएको उहाँले बताउनुभयो । “साहुसँग कुखुराका लागि दाना मगाउँदा दाना छैन भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ । दैनिक कम्तीमा एक क्विन्टल दाना चाहिन्छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “हप्तामै एक क्विन्टल दाना पाउन सकिएको छैन, मेहेनतको फल प्राप्त गर्ने बेला हाम्रो बेजोग भयो । आजसम्म बारीमा घाँस भएका कारण बल्लतल्ल घाँस खुवाएर कुखुरालाई बचाएको छु ।” बजारमा दाना पाउन छोडेपछि चौधरीले पाँच केजी दाना, २० केजी घाँस र ५ केजी चामलको भुस मिलाएर कुखुरालाई दिने गरेको बताउनुभयो ।
“किस्ता पैसा नतिर्दासम्म समूह उठ्दैन । किस्ता तिर्नलाई पैसा छैन । भएको पैसा कुखुरा फार्ममा खर्च भइसकेको छ”, मङ्गलले भन्नुभयो, “साँझ–बिहान अत्यावश्यक सेवाका लागि खुल्ने पसलजस्तै फ्रेस हाउस पनि खोल्ने भए केही राहत हुन्थ्यो । यस्तै अवस्था रहे रोडमा जानुको विकल्प छैन ।” कुखुरा व्यवसाय गर्दै १८ जनाको परिवार धान्दै आएका जानकी गाउँपालिका–७ का उत्तम चौधरीको बिलौना पनि यस्तै छ । फार्ममा उत्पादन भई बजारका लागि तयार भएको कुखुरा लकडाउनका कारण फार्ममै रहँदा परिवारलाई साँझ–बिहानको जोहो गर्न समस्या हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । “मसँग ७५० कुखुरा थिए । दुई सय कुखुरा मरे भने एउटा पनि बिक्री गर्न पाएको छैन”, उत्तमले भन्नुभयो, “परिवारको सबै आस भरोसा यही कुखुरा फार्म थियो । अहिले राहत माग्न जाउँ व्यवसाय छ । स्थानीय सरकार दिँदैन । नजाउँ परिवार भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।”
उहाँले स्थानीय सरकारलाई फ्रेस हाउस दैनिक दुईदेखि चार घण्टासम्म खोल्ने व्यवस्था गरिदिएको भए आफूजस्ता सयौँ कुखुरा व्यवसायीले ठूलो राहत पाउने बताउनुभयो । हाल टीकापुर नगरपालिकाभित्र पाँचा पोल्ट्री सप्लायर्स छन् । सप्लायर्सले आफँै लगानी गरी व्यवसायीलाई कुखुरा पाल्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बजारमा मासु खपत नहुँदा समस्या हुँदै आएको नयन पोल्ट्री एण्ड फिड सप्लायर्सका सञ्चालक दिलीप बुढाले बताउनुभयो । उहाँले हालको अवस्थामा नगरपालिकाभित्र रु ६० देखि ७० लाख मूल्य बराबरको कुखुरा तयारी अवस्थामा रहेको तर दैनिक रु एक लाख मूल्य बराबरको कुखुरा पनि बजारमा गएको छैन् भन्नुभयो ।
सप्लायर्सका सञ्चालक बुढाले कुखुराको दानाका लागि कम्पनीले नगदमा मात्र कारोवार गर्न थालेपछि आफूहरुसँग भएको लगानी नउठ्दा दाना आयात गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको बताउनुभयो । “कुखुरा व्यवसायीलाई राज्यले केही छुट दिन आवश्यक छ । अहिले पोल्ट्री व्यवसायीहरु दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यही अवस्था रहे पोल्ट्री व्यवसायी रोडमा आउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कहीँकतैबाट पनि हामीलाई सहज गर्ने बाटो पाइएको छैन ।”
उहाँले तत्काल केही व्यवसायीसँग बारीमा घाँस भएका कारण त्यसलाई दाना बनाएर कुखुरालाई बचाउने काम गर्दै आएको भए पनि त्यो उपाय पनि दीर्घकालीन नहुने र घाँस सबै व्यवसायीसँग नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - July 20, 2020 0
Breaking News Kumar Raut - August 26, 2020 0
काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । बिमा समितिले कोरोना बिमाको मापदण्ड बनाइदिएपछि लकडाउनमा पनि कोरोना बिमाका लागि...
Uncategorized Sushila Bishwokarma - January 22, 2021 0